Soomaaliya oo laga codsaday sii deynta Maxaabiis | KEYDMEDIA ONLINE
Soomaaliya oo laga codsaday sii deynta Maxaabiis
Dowladda Yeman ayaa ka codsatay dowladda Soomaaliya in lasii daayo kalluumeysato u dhalatay Yeman oo xukun maxkameed lagu riday.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasaaradda Kalluumeysiga ee Dowladda Yemen ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan yihiin xukunka lagu riday 31 Kalluumeysato oo udhalatay waddanka Yemen kuwaasoo toddobaadkii hore lagu riday xukun maxkamadeed kaddib markii lasoo qabtay iyagoo si sharci darro ah uga kalluumeysanaya Xeebaha Soomaaliya.
Wasaaradda Kalluumeysiga ee Yemen waxay ka codsatay Maamulka Galmudug in la sii daayo Maxaabiistaasi oo lagu xukumay mid kasta oo iyaga kamida lacag gaareysa $700 (Toddobo boqol oo Dollar) iyo in lala wareegay doomihii iyo Kalluunkii saarnaa.
Maxkamadda gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa xukunkaasi ku ridday muwaadiniinta udhalatay waddanka Yeman toddobaad kahor.
Arrinta ku saabsan kalluumeysiga sharci darrada ah ee xeebaha Soomaaliya waa mid soo socday tan iyo intii ay ku soo kusoo badanayeen xeebaha Soomaaliya ciidamada ka socda waddamada ee dagaalka kula jira waxa loogu yeero Burcad-badeedda.